मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. कोइराला - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराला नियुक्त भएका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कोइराला यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक र शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका निर्देशक थिए ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको समितिले कोइरालाको नाम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
ट्याग्स: डा भगवान कोइराला, मन्त्रिपरिषद बैठक, मेडिकल काउन्सिल